About Autism - autism
အော်တစ်ဇင် သည် စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုး မဟုတ်သလို၊ ကူးစက် ရောဂါတမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ၊ အော်တစ်ဇင်သည် လူမျိုး၊ဘာသာမရွေး၊ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး၊ နေရာဒေသမရွေး၊ ကျားမ မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မူကလေး(၆၈)ယောက် မွေးတိုင်း အော်တစ်ဇင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြစ်ပွားနေ ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အော်တစ်ဇင် ဖြစ်ပွားသူပေါင်း ခြောက်ဆယ့် ခုနှစ်သန်းနီးပါး ရှိပြီး အော်တစ်ဇင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း တိုးများ လာနေ၍ နှစ်စဉ် ဧပြီလ (၂)ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင် အမှတ်တရနေ့ (World Autism Awareness Day) ဟူ၍ သတ်မှတ် ထားပါသည်။
(က) အော်တစ်ဇင် ဆိုသည်မှာ
အော်တစ်ဇင် ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦး စွမ်းဆောင်ရည် တစ်ချို့နှင့်ဆိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုများ မညီမျှခြင်း (သို့)မသန်စွမ်းခြင်း တို့ကြောင့် လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး၊ပြောဆို ဆက်သွယ်ရေးနှင့် တွေးခေါ်မျှော်မြင် ဖန်တီးနိုင်သော စွမ်းရည်များ ချို့ယွင်း၊ အားနည်းခြင်း တို့ဖြင့် ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး သူတစ်ပါး အပေါ် အနည်းနှင့် အများ မှီခို၍ အသက်ရှင် နေထိုင် နေရသော အခြေအနေ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
သိပ္ပံ ပညာရှင်များ၊သုတေသန ပညာရှင်များမှ အော်တစ်ဇင် ဖြစ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ သုတေသန အမျိုးမျိုး လုပ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ တိကျ ခိုင်လုံသော အဖြေကို ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
အော်တစ်ဇင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူပါ။တစ်ချို့ပုံမှန် လူတစ်ဦး နီးပါးရပ်တည် နေထိုင်နိုင်ပြီး တစ်ချို့မှာမူ အခြားသူ တစ်ဦးအပေါ် လုံးဝ မှီခိုရပ်တည် နေထိုင် နေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် အော်တစ်ဇင် ဖြစ်သူများအား
၁-အပြင်းစား အော်တစ်ဇင် – တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ကိစ္စမှ အစ အခြားသူ တစ်ဦးအပေါ် လုံးဝမှီခို ရပ်တည် နေထိုင်နေရသူ
၂-အလတ်စား အော်တစ်ဇင် – တစ်ချို့ကိစ္စများတွင်သာ အခြားသူ တစ်ဦး အပေါ် မှီခိုရပ်တည် နေထိုင်နေရသူ
၃-အပျော့စား အော်တစ်ဇင် – ကိစ္စ အများအပြားကို ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်ပြီး ကိစ္စ အနည်းတွင်သာ အခြားသူ တစ်ဦးအပေါ် မှီခို ရပ်တည်နေထိုင်ရသူ ဟူ၍ ယေဘူယျ အားဖြင့် (၃) မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
(ဃ) အော်တစ်ဇင် လက္ခဏာများ
သိသာ ထင်ရှားသော အော်တစ်ဇင် လက္ခဏာများကို ကလေး အသက်နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်အရွယ်မှသာ တွေ့မြင်နိုင်သော်လည်း ကလေးအသက်ငယ်စဉ်(လသား)အရွယ်တွင် သတိထားကြည့်ပါက စောစီးစွာ သိရှိနိုင်ပါသည်။
-ကလေးအသက် ၃ လ အရွယ်တွင် ချော့မြူခြင်းကို တုန့်ပြန်မှု မရခြင်း၊ လှုပ်ရှားနေသော အရာဝတ္ထုကို လိုက်မကြည့်ခြင်း
-ကလေး အသက် ၇ လ၊ ၈ လ အရွယ်တွင် – အသံထွက်၍ မရယ်ခြင်း၊ ဘူးမမှုတ်သေးခြင်း
– ကလေး အသက် ၁၂ လ အရွယ်တွင် – စကား၂လုံးပါ ၀ါကျကို မပြောနိုင်သေးခြင်း (ဥပမာ-ဖေဖေ၊မေမေ၊မမ)
-မည်သည့် အသက်အရွယ်တွင် မဆို တတ်ကျွမ်းပြီးသား ကျွမ်းပြီးသား ကျွမ်းကျင်မှုများ လျော့နည်း သွားလျှင်(သို့)ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် အထက်ဖေါ်ပြပါ အချက်များ အနက်မှ တစ်ခု တွေ့ပါက ကလေး အထူးကု ဆရာဝန် တစ်ဦးဦး(သို့)အော်တစ်ဇင် ကုထုံး ပညာရှင် တစ်ဦးဦးနှင့် ပြသသင့်ပါသည်။
အော်တစ်ဇင်ဖြစ်ကြောင်း ဓါတ်မှန်ရိုက်၍ လည်းကောင်း၊ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ လည်းကောင်း မသိနိုင်ပါ။အော်တစ်ဇင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သောအဖွဲ့(ကလေး အထူးကု ဆရာဝန်၊ အော်တစ်ဇင် ကုထုံး ပညာရှင်၊ စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန်၊ Occupational Therapist, Physiotherapist, Speech Therapist စသည့်ဖြင့်) မှ စနစ်တကျ စမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးမှသာ သိနိုင်ပါသည်။
(ဆ) ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်သလား လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်သည့် ဆေးဝါး၊ ကုထုံး မရှိသေးပါ။ သို့သော် စောစီးစွာ သိရပြီး စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပါက သိသာစွာ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာပါမည်။
တိုက်(၄၉)ပထမထပ် ၊ အာသောကလမ်း
နတ်ချောင်းရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ်၊
© Copyright 2015. Autism Myanmar Association. All Rights Reserved.Developed by Ideal Technology,The Complete ICT Solution.